Nzira dze20 dzeKuti Zvemukati Zvako Zvirongwa zvirinani pane Wako Mukukwikwidza | Martech Zone
Nzira dze20 dzeKuti Zvemukati Zvemusoro zvinzvimbo zvirinani pane Wako Mukukwikwidza
Muvhuro, April 11, 2016 Chipiri, April 12, 2016 Douglas Karr
Zvinondishamisa kuti makambani ekushanda nesimba akaisa sei muchirongwa chemukati pasina kana kumbotarisa nzvimbo dzinokwikwidza nemapeji. Ini handireve vanokwikwidza vebhizinesi, ndinoreva organic makwikwi ekutsvaga. Kushandisa chishandiso sengeSemrush, kambani inogona nyore nyore kuita kukwikwidza kuongorora pakati pesaiti yavo nenzvimbo inokwikwidza kuti vaone kuti ndeapi mazwi ari kutyaira traffic kune anokwikwidza anofanirwa, panzvimbo pezvo, ave kutungamira kune yavo saiti.
Nepo vazhinji venyu vangave vachifunga backlinking inofanira kunge iri zano, ini handibvumirani. Ipo backlinking inogona kukonzeresa kumatanho akakura kwenguva pfupi, dambudziko nderekuti zviri nani zvirimo ichagara ichikunda mukufamba kwenguva. Chinangwa chako chinofanirwa kunge chiri chekugadzira zvirinani zviri nani pane zvakaburitswa saiti inokwikwidza. Paunoita basa riri nani kupfuura ivo, iwe ucha tambira zvinongedzo kudarika izvo iwe zvaungambogona kushandisa nemaoko.
Ross Hudgens weSiege Media ane zvakadzama posvo pa maitiro ekuwedzera webhusaiti traffic ne250,000+ pamwedzi kushanya ine infographic yekuti ungaisa sei zvemukati zvirinani. Ini pachangu, handina basa nezvakawanda nezvekutora matani evashanyi kusaiti sezvandinoita nezvevashanyi vanehunhu vanozonyoresa, vodzoka, uye vashandure. Asi iyo infographic ndiyo nugget yegoridhe nekuti inotsanangudza maitiro ekuisa zvemukati zvirinani. Iri zano ratinoendesa nguva dzese mumaitiro edu ezvirimo nevatengi.
Maitiro ekuisa zvirimo zvirinani
Tumira Slug - gadzira yako post slug uye ita yako URL ipfupi. Cherekedza kuti iyi URL dunhu redu sei mukuwedzera kune sei-ku-chinzvimbo-zvemukati-zvirinani, yakapusa, isingakanganwike URL iyo vashandisi veinjini yekutsvaga vanozonyanya kudzvanya uye nekugovana.
Zvemukati Mhando - odhiyo. Zviri nei tichida uye tichikura micro-giraidhi yakakura saizi enhau.
Peji Musoro - Kushandisa mazwi akakosha kwakakosha, asi kugadzira zita rakakodzera kubaya izano rakakura. Isu tinowanzo kushambadzira zita remapeji rakasiyana nemusoro wechinyorwa, wakanyatsogadzirirwa kutsvaga. Ndokumbirawo usabate vanoshandisa kutsvaga nemazita asina kukodzera, zvakadaro Iwe ucharasikirwa nekuvimbika nevashanyi vako.
Kunyora kuri nyore - Isu tinodzivirira mazwi akaomeswa uye maindasitiri madimikira zvakanyanya sezvinobvira - kunze kwekunge isu taisa tsananguro uye tsananguro dzadzo kubatsira vashanyi vedu. Hatisi kuyedza kuhwina mubairo wezvinyorwa nezviri mukati medu, tiri kuyedza kuita misoro yakaoma kunzwisisa. Kutaura padanho mushanyi wese anogona kunzwisisa kwakakosha.
Chimiro chePeji - Zvemukati zvakatarwa pekutanga zvaive nemabara ane zvinyorwa 78% yenguva. Kuronga peji rako muzvikamu zviri nyore scannable zvinobvumira vaverengi kuti vanzwisise zviri nyore. Vaverengi vanoda zvinyorwa nekuti ivo vari kutsvagisa uye vanogona kurangarira zviri nyore kana kutarisa pazvinhu zvavanoda kana kufuratira.
Mafonti Anoverengwa - Kugadziridza saizi yako yefonti maererano nechigadzirwa kwakakosha mazuva ano. Screen resolution inowirirana makore mashoma mashoma, saka mafonti ari kuderera uye kudiki. Meso evaverengi akaneta, saka tora nyore kwavari uye chengeta mafonti ako akakura. Ivhareji saizi saizi yeiyo Peji # 1 chinzvimbo ndeye 15.8px
Nokukurumidza Mutoro Nguva - Hapana chinhu chinouraya zvemukati senge inononoka kutakura nguva. Iko kune tani ye zvinhu zvinokanganisa peji rako kumhanya, uye iwe unofanirwa kugara uchirwira kukurumidza uye nekukurumidza nguva dzekutakura.
Zvinoonekwa - Avhareji chinyorwa chinzvimbo chekutanga chaive nemifananidzo gumi nepfumbamwe mukati meiyo peji kusanganisira mifananidzo, madhayagiramu, uye machati ari kumanikidza uye kugoverwa akakosha.
Photos - kutora zvakafanana stock stock kutora sechiuru mamwe masayiti hazvibatsire iwe kugadzira rakasarudzika meseji. Kana tawana mutori wedu wemifananidzo kuti aite kupfura nemakambani atinoshanda nawo, tinovaitawo kuti vatore zana kana kuratidza mapfuti akatenderedza hofisi nekuvaka. Tinoda kumanikidza mafoto anosiyanisa mutengi kubva kune vavanokwikwidza. Mhando yepamusoro mifananidzo inowana 121% zvimwe zvikamu
Mabhatani eGovera - kugadzira zvemukati zvemukati hazvina kukwana kana iwe usinga zviite nyore kuti izvo zvemukati zvigoverwa. Tinoita kuti zvive nyore nemabhatani akagadzirirwa kuruboshwe, pakutanga, uye pakupera kwechimwe nechimwe chezvinhu zvemukati. Uye zvinoshanda!
Infographics - Makuru masikirini anoda akanaka, makuru mifananidzo kana anesthetically inofadza infographics. Isu hatigadzi yakafara infographics nekuti ivo vanonetsa kugovana pane mamwe masaiti. Kugadzira zvinoshamisa infographics ayo akareba uye anoonekwa zvakanyanya anotibatsira isu vaviri kukwezva, kutsanangura, uye kushandura vamwe vazhinji vashanyi.
Links - Zvinyorwa zvakawanda zvinodzivirira zvinongedzo zvinobuda pamutengo wese uye ndinotenda iko kukanganisa. Kutanga, kupa chinongedzo kune yakakosha zvemukati izvo vateereri vako vanoda zvinowedzera kukosha kwako semurongi uye nyanzvi kwavari. Zvinotaridza kuti iwe unoteerera uye unokoshesa zvirimo zvikuru. Chechipiri, nema algorithms akagadziridzwa pakutsvaga, hatina kuona kudonhedzwa musimba redu nematani ekubatanidza anobuda.
Kureba Kwemukati - Isu tinoramba tichisundidzira vanyori vedu kune zvimwe zvinotsanangurwa, zvine mutsindo zvinyorwa pamisoro. Tinogona kutanga nezvimwe zvakapusa bara mapoinzi kuti muverengi aongorore tobva tashandisa misoro midiki kupatsanura mapeji muzvikamu. Isu tinosasa simba uye zvinosimbisa tag yekushandisa mukati mese kutora muverengi kutarisisa.
Goverana Zvemagariro - Isu hatingogovana zvemukati medu kamwe chete, isu tinogovana zvemukati medu nguva zhinji munzira dzedu dzemagariro. Zvemagariro midhiya zvakafanana nechikwekwe uko vanhu vanowanzo kuwana mune chaiyo-nguva. Kana iwe wakaburitsa chinyorwa kunze kwenguva iyo muteveri ari kuteerera, iwe warasikirwa nazvo.
Sunga Zvako Zvemukati - Chikamu chakakosha chevateereri vedu vanhu vasingawanzo saiti yedu - asi ivo vanoverenga tsamba yedu kana kupindura kune imwe nyaya yenyaya dzavakawana dzichinakidza. Pasina tsamba kana tsamba yehukama neruzhinji inosundira zvirimo kune vateereri vanokodzera, hatingazowaniwi zvakanyanya. Kana isu tisiri kugoverwa, hatisi kubatanidzwa. Kana isu tisiri kubatanidzwa, isu hatisi kuzotarisa.
Maitiro Ekutora Zvemukati KUNYANYA Zvirinani
Isu tinoda urwu runyorwa, asi tinoda kugovana akati wandei zvinhu zvakange zvatariswa asi zvakanyanya, zvakanyanya kutsoropodza:
munyori - Wedzera munyori wako nhoroondo kumapeji ako. Sevaverengi vanotsvagurudza zvinyorwa uye vachivagovana, vanoda kuziva kuti mumwe munhu ane hunyanzvi akanyora chinyorwa. Chinyorwa chisina kunyora chemukati hachizivikanwe senge chimwe nemunyori, pikicha, uye bio inopa chikonzero nei vachifanira kuteerera.
Mobile Formats - Kana peji rako risingaverengeke nyore, sekunge ringave neGoogle's Accelerated Mobile Peji (AMP) fomati, pamwe hausi kuzoenda munzvimbo dzekutsvaga nhare. Uye kutsvagurudza nhare kuri kuwedzera zvakanyanya pakukwira.
Ongororo yekutanga - kana kambani yako iine dhata indasitiri data iyo inogona kukosha kune ako tarisiro, chera mairi uye upe ruzhinji ongororo Ongororo yepuraimari igoridhe uye inogoverwa nguva dzose online. Panguva yakakodzera, data rechokwadi riri kudiwa zvakanyanya nemaindasitiri zvinyorwa, vanokurudzira, uye kunyangwe vakwikwidzi vako.
Yakapetwa Sekondari Ongororo - tarisa pazasi peiyi infographic uye iwe uchaona kuti vakaita yavo tsvagiridzo - kutsvaga anopfuura gumi nemaviri masosi ekutanga ekutsvagisa iyo inopenda mufananidzo wakajeka wezvaanoda zvakaitwa. Dzimwe nguva kungoronga uye kudhonza kunze kwegoridhe kunopa ruzivo rwese tarisiro yako yauri kutsvaga.
Bhadhara Kusimudzira - yakabhadharwa yekutsvaga kukwidziridzwa, yakabhadharwa mushandirapamwe, kudyidzana neruzhinji, kushambadzira kwemuno ... izvi zvese zvakasimba, zvakanangwa, kudyara mazuva ano. Kana iwe uchipfuura nedambudziko rekugadzira hombe zvemukati - iwe unonyanya kuve nebhajeti yasara kuti usimudzire iyo!
Tags: urefu hwemukatifont sizemifananidzounobatanidzaKushambadzira Infographicsorganic searchorganic yekutsvaga chinzvimbozvinobuda zvinongedzopeji pejimifananidzopost slugchinzvimboseoicho zitagoverana mabhataniURL
Varombo Vatengi Sevhisi iri Kukuvadza Yako Yekutengesa ROI
12 Zvinhu zvinokanganisa Yako Yepasi Email Email
Apr 12, 2016 pa 10: 18 PM
Chaizvoizvo Chikuru Post. ndinoda infographic maitiro atinofanira kugadzira UI yechigadzirwa.
Apr 15, 2016 pa 4: 24 PM
Ida ichi chinyorwa Dougie! zvine chekuita neruzivo 🙂
Apr 16, 2016 pa 1: 34 PM
May 4, 2016 pa 4: 04 PM
Kune iyo yakawanda chikamu chakakosha, asi yakakosha info Kutenda nekutirangaridza izvo zvakakosha.
Imwe yekuwedzera ndeyekuyeuka kuita yako misoro yemanzwiro. Rangarira kuti yako musika wekuvavarira ndiani uye gadzirisa marwadzo avo nekukwezva kwepamoyo.
May 4, 2016 pa 9: 13 PM
Mhinduro huru Annie neni tinobvumirana zvachose! Kubaya mumanzwiro inzira ine simba yekukurudzira muverengi wako.